Kedu mmega ahụ kacha mma ị na-eme n'ụlọ? - Mmega
Isi > Mmega > Mgbatị ụlọ - otu esi edozi
Kedu mmega ahụ kacha mma ị na-eme n'ụlọ?
7Mmega Ahụ Kacha Mma
Na-eje ije. Ihe kpatara na ọ bụ mmeri: You nwere ike ịga ije ebe ọ bụla, oge ọ bụla.
Oge Ọzụzụ. Ihe kpatara na ọ bụ onye mmeri: Oge agụmakwụkwọ na-eme ka ahụike gị dị elu ma na-agbanyekwu calorie iji nyere gị aka ịkwụsị ibu.
Crunches - A.zọ A.
Welcome to Episode 2 Otu esi atụfu ibu na afọ abụba site n’enyemaka nke sayensị Nkebi nke 1 Anyị elegoro anya na nri nri Nkebi nke abụọ Anyị lere anya n’omume dị mfe onye ọ bụla nwere ike ime n’ụlọ iji mebie ahịrị eriri ahụ na mgbe anyị kpọkọtara mmadụ abụọ ọnụ ihe ga-esi na ya pụta ga-abụ ihe ịtụnanya ugbu a, ma ị sitere na mbido mbụ nke ọnwụ ọnwụ ma ọ bụ naanị chọọ mmega ahụ wee pịa isiokwu a Obi dị m ezigbo ụtọ na ị nọ ebe a n'ihi na ị kpebiri na ị chọrọ ime mgbanwe, ị kpebiri na ị ga-enwe ahụ ike ma kpebie ị chọrọ uru ahụ ike yana dịka m kọwara na isiokwu m gara aga, ị hụrụ abụba, ọ bụghị naanị sentimita asatọ Anyị tuo ị ga - ahụ nke a mara dịka subcutaneous abụba ma n'ezie Ize ndụ abụba bụ abụba gburugburu anyị afọ na n'ime abụba The abụba gburugburu anyị akụkụ a maara dị ka visceral abụba. Ugbu a, anyị maara na nnukwu abụba visceral na-etinye anyị n'ihe ize ndụ maka ọrịa obi, na-etinye anyị n'ihe egwu ụdị ọrịa shuga 2 na ụmụ nwanyị. Achọpụtala na ị nọ n'ọnọdụ dị elu nke ọrịa kansa ara.
Nke ahụ bụ mmeghe na-esote. Ka anyị mụta mmemme isii sitere na ọmụmụ emere na Oxford. To ga-eme ha ugboro anọ n’izu ụka n’ụbọchị ndị ọzọ - egbula oge buru ibu ka onye ọ bụla mee ha n’ụlọ, ọ bụrụ na ị mee ha nke ọma, ị nwere ike ịtụ anya ida ihe dị ka sentimita abụọ site n’úkwù gị naanị n’ime izu isii, na-enweghị Diet ọ bụla gbanwere ya mere mụta mmemme ahụ ma emesịa anyị lelee sayensị dị n'azụ ya na otu o si arụ ọrụ, yabụ ka anyị bido site na otu plank plank, tinye ihu gị aka n'ala na ikpere aka gị n'okpuru ubu gị na ogwe aka gị yiri nke gị aru ma jigide nke a ugbua 20-30 sekọnd, ọ bụrụ na nke a bụ obere ihe isi ike, mee ikpere ikpere kama itinye ikpere gị n'ala ma tinye aka gị n'okpuru ubu gị dị ka a ga - asị na ị na - achọ ịkwanye , nke a bụ mmega ahụ izizi jidere maka 20 ruo 30 sekọnd mere ugbu a ka anyị gaa na seco nd otu n'ime ọmụmụ ihe nke bụ isi nọdụ ala, yabụ nọdụ ala, gbuo ikpere gị, jikọta ha ọnụ ma debe aka gị n'obi gị ma ọ bụ n'ụlọ arụsị ndị ị na-anọdụ ala.
Biko zere itinye aka gị n’azụ isi gị mgbe ị na-anọdụ ala na maka omume niile a na-amụ n’ọmụmụ ihe ahụ, ndị sonyere ya mere usoro atọ nke iri, yabụ gbalịa ime nke a ma ọ bụ wulite onwe gị elu, anyị adịla ọkara, yabụ na-esote anyị nwere ikpere dị elu, wee dinara ala ma ọ bụ gbuo ikpere gị ma mee ka ụkwụ gị bilie ma gbalịa imetụ ikpere gị aka na ikpere aka gị n'akụkụ aka gị ma pịa afọ gị mgbe ikpere gị metụrụ ikpere gị ọzọ m na-ahụ na-esote mmega a bit mfe otú ọ bụ ụdị nke a na-ezu ike mmega na ọ bụ ihe bụ isi crunch otú dina n'ala, gbuo ikpere gị, na-etinye aka gị n'akụkụ isi gị. Ugbu a jiri nwayọ kpughee nsị gị ma weta ubu ubu gị n'ala. Kwesịrị ijide n'aka na ubu gị dịpụrụ adịpụ n'ala ka mmega ahụ wee dị irè .Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbakwunye ntakịrị nguzogide mmega ahụ a, ị nwere ike ime crunches ụkwụ-ụkwụ kama ma ọ bụ dị ka ihe ọzọ.
Agbanyeghị, nke a bụ nhọrọ. Nanị ihe dị iche bụ na ịdebe ụkwụ gị na ikuku na imetụ mkpịsị ụkwụ gị ọzọ bulie ubu gị n’ala ka mmemme a dị irè na-esote. Anyị mere nọdụ-na gbagọrọ agbagọ soit bụ otu ije dị ka a-anọdụ ala-anyị mere na mbụ, ma na-agbagọkwa ahụ na elu dị ka e gosiri.
ego igwe kwụ otu ebe
Jide n'aka na ị gbanwere n'akụkụ ọ bụla iji jide n'aka na ị na-arụ ọrụ n'akụkụ abụọ ma ọ bụrụ na ị na-alụ ọgụ na nke a ma ọ bụ nkwụsị nke na-agbanye ụkwụ ga-enyere aka na mbido ma mechaa bụrụ oge maka azụ azụ, nke a makwaara dị ka Superman. Ebumnuche nke mgbatị ahụ bụ ịrụ ọrụ akwara azụ gị mgbe ị gwụchara mmemme ahụ, yabụ dina ala n'ala, dozie aka gị na ụkwụ gị, ma jiri nwayọ bulie obi gị na ụkwụ gị n'ala ka ị na-eme nke a. gbadaa azụ, jiri nwayọ wedata ya n’ala wee mee nke a maka ụzọ atọ nke iri, nke mezigharịrị mmemme ahụ wee cheta, ọ bụrụ na ị mee ha n ’ọfụma, ị ga - atụ anya ime ha n’ime opekata mpe izu isii. n'úkwù, nke dị mma, mana ọ doro anya na ọ bụghị nke ọma dịka ndị na-eri nri anyị kwurula banyere ya na nke ọzọ efunahụghịkwa? Ha tufuru kilogram 0,5 na 1 kwa izu ma mgbe izu isii gachara, ha tụfuru 5 centimeters n'úkwù na nke ahụ bụ n'ihi na ndị sonyere na-eme mmegharị afọ ahụ, ya bụ, emeghị mgbanwe nri ọ bụla, ọ bụ naanị meziwanye akwara ụda ha, na bụ, site na imeziwanye akwara ahụ, ahụ gị nwere ike ijide abụba ka mma.
Nke ahụ pụtara na ị naghị efufu abụba n'ezie, mana ahụ gị na-ejide abụba ahụ nke ọma, yabụ, ọdịdị nke eriri akwa ahụ ka mma, yabụ mbelata centimita abụọ, ọ bụ ya mere o ji dị oke mkpa na ị naghị edozi afọ. crunches Ọnwụ ma ọ bụ abụba afọ abụba ee anyị maara na site n'ọmụmụ ihe mgbe izu isii gachara. Ihe ndị a afọ na-arụ ọrụ, enwere mbelata nke centimita abụọ, mana maka mmetụta kachasị ị ga-eme mgbanwe nri nri nke m kọwara na nke mbụ, m ga-ahapụrụ gị njikọ gị ebe a na nkọwa dị n'okpuru ma ọ bụrụ na ịnweghị hụrụ isiokwu a ma cheta ma ọ bụrụ na ị na-eri nri ị nwere ike ida 0,5 na 1kg kwa izu nke dị ịtụnanya mana Nke a bụ ụfọdụ akụkọ ka mma, ọmụmụ ahụ gosikwara na mgbe izu isii gachara, ndị mmadụ belatara abụba visceral ha, abụba dị egwu nke na-etinye gị ihe ize ndụ maka ọtụtụ v Ọnọdụ ahụike dị iche iche mụbara Ọfụma isiokwu ahụ nwere mbelata abụba visceral ha ihe dịka 14% nke bụ ihe ịtụnanya na ha nwekwara mbelata na cholesterol ha na-enwekwa mbelata nke ọbara mgbali ha ma mgbe izu isii gachara eriri ha. site na centimita ise nke ozo di egwu, ugbua maka nke abuo, chee ma oburu na i mee mgbanwe nri site na ihe omume 1 ma jikọta ya na omume anyi muru taa, ihe ndi a kwesiri ibu ihe di egwu ma p mgbazinye ego echefula na anyị bụ ndị toro eto ga-azụ ọzụzụ oge niile, kedu ihe nke ahụ pụtara na anyị ga-eme 150 nkeji nke ọzụzụ na-agafeghị oke kwa izu ma ọ bụ nkeji 75 nke ọzụzụ siri ike kwa izu. ị na nkọwa dị n'okpuru ebe a na mmega afọ gị ga-abụ akụkụ nke ya na-enye aka dabere na ike na mgbe ahụ ihe anyị na-enweta nri ọ bụla ọ bụ ezigbo echiche iji chọpụta ọnọdụ ibu ibu gị na mbụ n'ihi na ị nwere ike ịnọrịrị na ahụike dị mma yabụ gị nwere ike ọ gaghị adị mkpa ka i felata ugbu a.
Easiestzọ kachasị mfe iji lelee nke a bụ site na iji igwe okwu BMI m ga-ahapụrụ otu njikọ na nkọwa dị n'okpuru maka gị ihe niile ị na-eme itinye aka n'ịdị elu gị, ịdị arọ gị na okike ya ma ọ ga-agbakọ ya wee kwuo nke gị Ibu ọkwa dị nnọọ apụ. Biko chetakwa na amaara m na mkpụrụ ọgwụ nri na-enweghị ikike nwere ike iyi ka ọ bụ azịza ajụjụ a na-ajụghị ajụ, mana biko cheta na ihe ndị dị na ya bụ amaghi, enweghị nkwado na nke a na-enyochabeghị na n'ihi nke a, mmadụ abụọ na mmadụ atọ kọọrọ nsogbu dị egwu nke ọma biko biko nọrọ na nchekwa, pụọ n'ebe ha nọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere ya Edere m otu isiokwu maka MHRA n'oge na-adịbeghị anya na m ga-ahapụrụ gị njikọ gị ebe a na nkọwa dị n'okpuru ebe a lee anya Biko nweere onwe m ma enwere m olileanya na ndụmọdụ m enyerela gị aka N’isiokwu a n’izu a. Biko mee ka anyị mata otu ị si eme site na ịhapụ okwu n'okpuru ma ọ bụrụ na ịnwere nke ọ bụla nke aka gị biko hapụkwa okwu n'okpuru n'ihi na m ga-enwe mmasị ịgụ ya ma ejiri m n'aka na onye ọ bụla na-ahụ isiokwu a, ịgụ ya kwa ga-abụ mgbe niile cheta na ị di uku ma hu gi n’izu na abia iji tufue sentimita abuo n’apata obi ya na akara aka ahu mgbe ufodu ogugu a adighi aru oru, o di ka ngbanye injin, mgbe ufodu mmiri iru mmiri adighi nfe na mkpisi aka ya inweta Ọ dị mma pịa ụda ee mbụ nsogbu ụwa, m ga-agwa gị ugbu a, enwere m ihe nkiri ụbọchị ọjọọ taa m kwuru ihe niile na-ezighi ezi, enweghị m ike icheta ahịrị m ma ọ siri ike ikwu eziokwu na kọfị a Alex mere m m laghachiri ndụ m nwetara ihe ịtụnanya Ọtụtụ neatly mere idaha N'eziokwu, a idaha m dị nnọọ ka jikota mmega ahụ na nri na eziokwu banyere nri na dị ka m kọwara na m ikpeazụ isiokwu, lee abụba gị, ọ bụghị naanị tuo anyi bu (ochi) tuo anyi puru tuo pinc h anyị nwere ike tuo okay, ọ bụ ihe ịtụnanya, enwere ezigbo mmetụta na mmetụta uche na-agagharị ka ịgwa m ihe ị chere banyere ihe nkiri a, Nadia, ma eleghị anya tinye timestamp ma ọ bụ ihe dị ka nke ahụ ka ndị na-ekiri nwere ike ịlaghachi azụ ma gwa anyị ihe ha chere na nke ahụ niile dị ka ndị isi nduzi ị maara Scorsese mgbe ị na-ele youtube dị ka gị na gị ịrụ ọrụ ma nwee onye ọrụ gị Ian Plummer ị nwere ike niile Businessme Business Hey ụmụ okorobịa, ekele maka ilele edemede nke izu a, pịa ya dị ka nke a ma ọ bụ Idenye aha Ugbu a iji debe ruo ụbọchị na isiokwu ọhụrụ kwa izu
Kedụ ngwongwo ụlọ m nwere ike iji dị ka ibu?
ỌkarịIhe EzinaụlọGịNwere ike Jirimaka mgbatịIbu
Galọn mmiri ma ọ bụ mmiri ara ehi. Mmiri mmiri na mmiri ara ehi dị mma n'ihi na ha nwere njikwa - na-eme ka ọ dị mfe ijide ha, ịgbanye ma na-efegharị.
Nnukwu karama nke na-asa ákwà.
Akpa akpa jupụtara na akwụkwọ ma ọ bụ ite.
Akpa nri anụ ụlọ.
Standard akpa nduku.
Ikpe nke La Croix.
Akwụkwọ Dị arọ.
Hey ụmụ okorobịa ọ bụ Kalei ma ọ naghị ajụ maka ihe dị ọcha ma n'oge oge a na-atụghị anya ya, ekpebiri m ịnwale ihe ịma aka ọzọ iji mee ka anyị laghachi n'ụlọ. Anọ m na-agbalị ịchọta ụzọ ụfọdụ iji mee ka m na-arụsi ọrụ ike, na-akpali akpali, na-akpali iji mee ka ahụ m dị ọkụ ma ọ na-esiri m ike ma ọ bụrụ na ịnweghị akụrụngwa kwesịrị ekwesị, yabụ ọ dị nwute na m lere Amazon anya, nwalee di na nwunye dumbbells kettlebells na ebe ọ bụ na unu niile na otu ife na-eresị ha nke na-agaghị egbochi m na-arụsi ọrụ ike n'agbanyeghị ihe mgbaru ọsọ m ịchọta ọtụtụ ihe ezinụlọ dị ka o kwere mee ka nwee ezigbo mmadụ kwa ụbọchị maka otu izu nweta ọzụzụ Aga m anwa ịchọta ihe gburugburu ụlọ nke m nwere ike iji wee bụrụ na m ga-ahụ ụfọdụ ihe, ngwaọrụ, ihe ọ bụla ị ga-enwe na anyị nwere ike ime nke a ọnụ ka m nwee ihe ndina m n'ụbọchị mbụ m bụ n'ụzọ nkịtị na ya 24/7 otú ahụ ka m kwubiri na ọ bụ adịghị, ọ bụ ike ezuru m n'ezie na-eme ihe dị ezigbo mma b can nwere ike ehulata gị ikpere ruo a 30 ogo n'akuku, welite gị obi na ịgbatị gị ala azụ iji zere mmerụ ahụ. Dina n'ala na aka gị n'akụkụ abụọ na ikiri ụkwụ gị na ụkwụ ụkwụ gị ka ị nwee ike ịlụ ya, ọ bụghị ezigbo ụlọ ọrụ ị na-arụ, mana ị na-eku ume ka ị na-ebuli wee kupụ ume ka ị na-ewedata ala azụ anyị nwere ike ịme mgbatị ahụ. ị dịla njikere, adịla m njikere maka ihe anyị ga-eme? 2/3 vac ojiji obu ihe i gwara m ka m were vacuum cleaner? Ee, achọrọ m ka ịnọ n'otu ọnọdụ ahụ m kpọrọ gị asị nke mere na ụbọchị nke atọ bụ ịsa akwa? Day na m na-atụ ya ụjọ n'ụzọ doro anya na m maara na m nwere ọtụtụ akwa m ga-eme, mana na njedebe ọ bụ ibu dị arọ nke m ji mee nri ehihie m.
Nwanne m nwoke nọ n’ime ụlọ ya ụbọchị niile m wee kpọọ ya na-eche na ị ga -? nyere m aka na akwa ahụ ma hapụ ya ka ọ gbagoo na steepụ ma ọ bụ ihe ọ becauseụ n'ihi na o chere na o zuru ezu iji laghachi ngwa ngwa, mana ọ bịara doo m anya na m ga-eme nke a ihe omume ezinụlọ n'ihi na onye ọ bụla nwere ịbụ ịbụ onye na-arụsi ọrụ ike n'ụlọ a n'ụbọchị nke anọ achọtara ihe ochie nke mere na m laghachiri n'ala ndị amachibidoro ma chọpụta ụlọ ndị nne na nna wee chọpụta na nna m nwere boombox ya mana amaara m na stereo dị arọ n'ihi na ị ga-eleghachi anya azụ Ubochi ha jidere ya n'ubu ha dika oh oh m na eme, i mara, odi m ka mmara na ha gha aru oru oge obula ha tinyere stereo na ichoro aka ma mara mma nke mere na aga m eme ato ato nke iri ngwa ngwa tupu ha achọpụta n'ihi na ha na-agbaghasị uche ha, m ga-amịpụkwa n'azụ dịka ihe mr. Robot Amaara m na ntorobịa nke a bụ ihe ọ soụ n'ihi ya, taa, m na-enyere nne m aka isi nri, m ga-abụ obere nri nri gị, ị nwere obi anụrị maka anyị ịme ya. Obi dị m ezigbo ụtọ iri nri a, ọ dịkwa mma ọ bụ ihe na-ewe iwe ma ọ dị ka nke ahụ abụghị ihe m debanyere aha, olee maka m na-ahapụ ya naanị na m na-eme ya dị ka m ka ị wee nwee nkụda mmụọ na mgbe ahụ ọ dị mma yabụ uru ndị ahụ bụ ndị ga-eji ihe okike m rụọ ọrụ chọta ihe iji zụọ, amaara m na mgbe ụfọdụ ọ na-adị mfe ịnweta dumbbell, nweta eriri elu wdg ma mgbe ị na-enweghị nke ahụ, ị ​​ga-eji ụbụrụ gị chọpụta ihe ị ga-eji kama nke ahụ enwere m obi anụrị iji okike m iji chọta ihe nke abụọ, ọ dị ọnụ ala dị ka m anaghị etinye ego n'ụzọ nkịtị, enweghị ego m ka nwere Ego na obere akpa m na atọ m ga-anọnyere ezinụlọ m oge dị ukwuu Mgbe ewepụrụ gị, mgbe ị na-anọpụ iche, ị na-emebu ịnọ naanị gị n'ime ụlọ gị ma ọ bụ na ebe nchekwa gị ma ghara ịgwa ndị ọzọ nọ n'ụlọ ahụ okwu s bụ ohere nye m ọ bụghị naanị ka ya nwee obi ụtọ n'ihe m masịrị, kamakwa ka anyị nwee obere oge na ihe ndọba oriọna, dịka m ejighị n'aka, mana mgbe m onwe m nọdụrụ ala wee chee echiche banyere ya Nyochaa ụlọ m n'ezie, m mechara chọta ezigbo akụrụngwa iji nweta ihe ịma aka nke abụọ m chere ihu na m nwere ike ịme. Ọtụtụ n'ime mgbatị ahụ lekwasịrị anya ma ọ bụ lekwasị anya na ụkwụ ma ụkwụ m na-afụ ụfụ ugbu a. anyị chọpụtakwara ụfọdụ nke bụ forearms ma enweghị m ike ịme abs ka m wee nwee ike itinye na absand? Enwere ike n'oge ụfọdụ enwere m ike ịnwa ịchọta ihe, dị ka ikekwe akwa nhicha ma ọ bụ ihe ọ bụla, mana enweghị m ike ịme nke ahụ, na ihe ịma aka a, m ga-achọ ịma ihe ụmụ mmadụ na-eme iji nọrọ na ike na ihe ndị a n'okpuru ruo mgbe ọzọ oge na Stacey bye ụmụ okorobịa
Kedu ụdị akwara kwesịrị ịrụkọ ọrụ ọnụ?
Kedu akwara kwesịrịMọrụnaọnụ? Iji mee ka uto dịkwuo elu, ọ kachasị mma ilekwasị anya naanị n'otu isiakwarachịkọta oge ọ bụla (obi, ụkwụ ma ọ bụ azụ). Gbakwunye mgbatị gị na omume ndị na-elekwasị anya na obere abụọotu akwara(biceps, triceps, hamstrings, ụmụ ehi, abs na ubu).Abụọ 17, 2019
Ihe nkwụsị 100 ọ ga - eme ihe ọ bụla?
Over overtrain gị obi na triceps
Ọ bụrụna-emeka100 Push Upssiri ike maka gị, mgbe ahụ akwara gịgaAchọrọ mgbake mgbe emechara. Ọ bụrụ100 Push Upsesighi ike nye gi, yabụganaanị bụrụ obere ọrụ ị na-eme iji nwee ahụ ike. Ọ gaghị agafe ụgbọ oloko ma ọ bụ ọbụlagodi akwara gị nke ọma.Nọvemba 2, 2016
(upbeat electronic music) - Kedu ihe dị elu, ọ bụ Chris Heria, nabata na vlog ọzọ. Taa, aga m egosi gị otu esi eme 100 pushups kwa ụbọchị, mana tupu m egosi gị, achọrọ m ikwu maka ihe kpatara o ji dị mma. Ntughari bu ihe omumu maka ihe omumu nile, iwusi ike na akwara n'ime obi, triceps na ubu, ma n'otu oge ahu na aru oru ala na akwara isi.
Ọ bụghị naanị na ị na-etolitekwu ike na nkọwa na otu ahụ ike ahụ, mana ị na-emeziwanye mmegharị mmegharị gị, nke sụgharịrị n'ime mmemme ndị ọzọ niile, yabụ ị nwere ike ibuli elu karị ma gaa n'ihu na-aga n'ihu n'ihu ma mechaa zuru planche push-acha ọkụ. Pushups abughi nani ihe di elu n'inwe ike na akwara, kamakwa enwere ike ime ya ebe obula, ebe obu na ha achoghi ihe obula ma o nweghi ohere obula, n'agbanyeghi egwuregwu i na eme, ma obu ihe ndi mmadu na-eme, ike ike, ịkụ ọkpọ ma ọ bụ ọzụzụ dị arọ, pushups bụ mgbe niile akụkụ nke atụmatụ ọzụzụ nke ndị ọ bụla na-eme egwuregwu na-eme ezigbo ihe kpatara ya. ọ dịkarịa ala, ugboro anọ n’izu, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla.
Emeela m omume nke ime ya ozugbo m tetara ma nke ahụ enyerela m aka ịbawanye ọzụzụ nke mere ka ọ dịrịkwuo mfe ịme. Na mbido 100 pushups dị m ka nke ukwuu na enweghị m ike ịme ọtụtụ ahụ n'usoro, yabụ na mbido m mere usoro 10 nke 10 ọdịiche dị iche iche nke pushups maka ngụkọta nke 100 pushups, mana yana ọdịiche dị iche iche m nwekwara ike nweta akụkụ dị iche iche nke obi m Ime ka akụkụ dị iche iche nke triceps m, isi, na akụkụ ndị ọzọ nke ahụ m nwee akụkụ dị iche iche na ibu dị iche iche. Na n'ezie, ụfọdụ ntụtụ-elu siri ike karịa ndị ọzọ, nke ahụ nyekwara m aka ịbawanye ume m wee wuo ugboro ugboro.
A Na mgbe m nwere ike ime nke ahụ, amalitere m ịme ngbanye 20 n'usoro kama 10, amalitere m Site na ịme usoro ise karịa nke 10 ma na-amụba ọnụ ọgụgụ ndị na-emegharị, anyị na-ebelata oge izu ike ma na-abawanye oge esemokwu nke otu ọ bụla, wulite ọtụtụ ume na ntachi obi, ma nweta ọtụtụ ọbara n'ime akwara kama naanị 10 reps Na-eme 10 We'redị Anyị ga-eji usoro a iji mee ka anyị kwughachi ma mechaa mee ka ọ dị mfe mee 100 pushups kwa ụtụtụ. Ozugbo i nwere ike ime usoro ise nke ọtụ 20, ị nwere ike ịme ụzọ anọ nke 25 pushups, ụzọ atọ nke 33 pushups, ụzọ abụọ nke 50 pushups, nso na nso na 100 oge ọ bụla. Emechaa 50, 50 nwaa 60, 40, 70, 30, 80, 20, mesịa kụọ 100 n’usoro.
Site na nke ahụ ị gaara enwe ike ịkọwapụta akwara dị ukwuu na nrụgide ara. Ekwuru m tupu oge a na m na-eme nke a maka ihe dị ka nkeji anọ na anọ nke bụ otu izu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla na ihe kpatara nke a bụ na achọghị m ịgabiga akwara nrụgide m ma mepụta enweghị aha, Achọrọ m nrụgide m bụ ka o siri ike ka m sere. N'ihi ya, ọ bụ nnọọ dị ka ihe dị mkpa na-arụ ọrụ na ụgbọ oloko gị - acha ọkụ fọrọ nke nta kwa ụbọchị kwa.
Nke ahụ bụ ihe m na-eme ugbu a, ọ bụrụ na m mee 100 pushups, m na-emekwa 100 pullups iji jikọta ya na. Inwe mmegide gị na ndị na-emegide gị dị ezigbo mkpa, ọ ga - eme ka akwara gị sie ike ma gbochie mmerụ ahụ, mana ọ bụrụ na ị na - ebido na ịpị na ịpị otu ụbọchị nwere ike bụrụ oke olu maka gị, ị nwere ike ịmalite ịmalite otu ụbọchị -ups, otu ubochi. Maka echefula inye ahụ gị ezumike ụbọchị ole na ole, n'ihi na mọzụlụ gị chọrọ oge iji weghachi, ịmaliteghachi na-esiwanye ike ma sie ike, na-azụkwa ndị ị na-adọta, ị nwere ike kewaa ha n'otu ụzọ ahụ, 10 nke 10 ga - ebido ma mechaa bulie ihe ruru ise nke 20 na ihe dịka, dị ka ihe nkwụsị.
Na n'ezie, ndọtị, ị na-eji ọtụtụ ihe dị arọ ahụ gị ka ọ na-esiwanye ike, ị nwere ike ịmalite mgbe ọ bụla ị na-eji ihe ndị Australia na-adọta ma ọ bụ na-eme ka ọ dị mfe ma na-eji ụfọdụ n'ime ndị ahụ gụọ ndị 100 na-adọrọ adọrọ ị ghọọ. oops, anyị ga-emekọ ihe ọnụ, naanị ihe ị chọrọ bụ ibudata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google, mepee ebe mgbatị YouTube ma ị kwesịrị ịchọta usoro a, ị dịla njikere ịga, anyị na-aga bido n’isi site na mbido, anyi n’eme ngbanwe iri puru iche maka 10 reps, 100 ngụkọta push-acha ọkụ, ka ị na - eme nke ahụ, ị ​​ga - emecha mee naanị ise n’ime mmemme ndị a, ihe omume ndị a maka 20 reps , anọ nke mmega ahụ maka 25, na na, ruo mgbe ị ruru Reach 100. Ọ bụrụ na ị na-elele ugbu a ma bụrụ onye mbido anaghị enwe nkụda mmụọ, ụdị nkwụsị ọ bụla dịgasị iche ntụgharị anyị ga-eme ebe ahụ ga-abụ ihe ọzọ mbido mgbanwe ị nwere ike ime.
Onye ọ bụla n'ime ihe omume ndị a nwere ike ịme na elu elu ma dabere na nkuku a na-eji, ga-ebelata ahụ ahụ na nguzogide eji na mmega ahụ iji mee ka ọ dịkwuo mfe maka onye ọ bụla, naanị họrọ ebe dị elu nwere akụkụ dabara adabara gị na ọ dị mma ịga - fashionable pushups. Ya mere ka anyị gbadata n’ala ma gbaa mbọ hụ na anyị zuru oke n’ịgbagharị a ka ngagharị ndị ọzọ zuru oke. Ya mere, anyị chọrọ ka aka anyị bụrụ ubu n'obosara, anyị chọrọ ka mkpịsị aka anyị kwụ n'ahịrị na ubu anyị.
Chọkwara ịbụ onye kwụ ọtọ na isi gị, mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ gị rue ubu gị, gbam elu, anyị ga-agbadata n'ụzọ niile Bịa. Pụgharịa ozugbo. Ugbu a ị naghị eme ya You chọrọ ka ikiaka gị ga - apụ apụ ma ị chọghị ka ikpere gị ga - aga nke ọma, ịchọrọ ịme dị ka akụkụ ụgbọ elu. Heria Music ♪ Na Na, ebe anyị nwere ya.
Nke mbu, 10 pushups. Mgbe ị na-eme mgbanwe dị iche iche nke ịkwanye, ịchọrọ ijide n'aka na ị na-ejidesi ụlọ ike na ị na-agbanye isi gị na hips gị adịghị agbada oke ma ọ bụ dị elu. Ya mere, anyị nwere nkwụsịtụ 10, ugbu a ị ga-aga, anyị ga-ebufe ụdị nkwụsị na-esote.
Ọ ga-abụ nnukwu push-acha ọkụ. Yabụ ka anyị were ọnọdụ aka, na mkpịsị aka wee pụta, anyị bịara n'obi anyị, weghachite aka, gbatịa aka, kpọchie akpọchi. Nnwere onwe zuru ezu nke ịgagharị, isi okwu, agbatị elu.
Ọ dị mma, ebe ahụ ka anyị nwere ọdịiche ọzọ. Mgbanwe ndị a niile ga-arụ ọrụ ọzọ na akụkụ nke triceps, obi, na ubu. Ugbu a, ka anyị gaa na mgbanwe ọzọ, anyị ga-aga maka 10 diamond pushups, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịnweta ụdị diamond ahụ tinye aka gị ọnụ dịka o kwere mee ma ọ bụrụ na ngagharị ahụ siri ike karịa ịme ya n'otu elu dị elu.
Yabụ n'ebe ahụ ka anyị nwere ya, nke ahụ bụ ihe nrịba 30, anyị nwere naanị 70 fọdụrụ. Ugbu a, anyị ga-eme ka ihe isi ike dịkwuo ntakịrị, ihe omumu ọzọ anyị ga-amalite ga-abụ ihe mgbawa. Ọzọ, ọ bụrụ na nke a siri ike nke ukwuu, ịnwere ike ime ya mgbe niile n’elu elu.
Ya mere, anyị ga-agbadata ala, kwasie ike dịka anyị nwere ike, ma bulie ala. Kwesighi ịgbada gburugburu ala ma ọ bụrụ na ịnweghị ike, mana ịchọrọ n'ezie iwepụ ihe ọ bụla na-eme iji nye ya ike kachasị. Egwu Heria, Ọ dị mma, ma ọ dị, 40 gbadara, 60 hapụrụ.
Transition na nke ise push-elu mgbanwe, anyị ga-eme push-acha ọkụ. Ka anyị rute n’ala, anyị ga-eme ihe nrụgide, gaa n’otu akụkụ, gaa na nke ọzọ. Gaa, gaba, Gaba, Gaba ♪♪ Oh, oh, oh ♪ Okay, there we have it, 50 pushups ekpe.
Ihe ọzọ anyị ga - abanye ga - akụ aka, ma ụdị dị iche iche a ga - amanye anyị ịkwanye elu ma jiri ike na nkwughachi ọ bụla. Ya mere, ka anyị gaa n'ihu, buru ya gbadaa n'ala, ọ bụrụ na nke ahụ siri ike, mee ya n'elu elu, anyị ga-agbasi ike ka o kwere mee, kụọ aka, laghachite. Egwu Heria ♪ Na na na, ebe anyị nwere kụrụ aka Pushups. anyị ga-abanye n'ime ịgba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba agba mmiri, na-echetakwa na onye ọ bụla n'ime ụdị mgbanwe a nwere nsogbu nke ya, na-eme ka akwara dị iche iche, na-enwekwa nguzogide ya, yana ndị a na-agba ụta. gbasie, anyị na-enweta ihe ahu ahu na onye ọ bụla N'ịdị nwere karịa tupu na abụọ aka na ụkwụ.
Yabụ ọ bụrụ na anyị ga-eme obere ọsọ ọsọ, were obere oge kute ume anyị, kuo ume (iku iku ume) n'ọnụ gị. Ka anyị gbadata n’ala. Nwere ike ime nke a mgbe niile n'elu elu.
Anyị ga-agbadata, jigide otu ogwe aka ọtọ, bia n'ụzọ niile gbagoo, gaa n'akụkụ nke ọzọ. Naanị na ị chọrọ imesi ike na otu ogwe aka, nke ọzọ ogwe aka, nke a bụ naanị maka nkwado., Ah, ooh, ooh ♪♪ Ah, ooh, ooh right Ọ dịkwa mma, n'ebe ahụ ka anyị nwere akụ ụta pu sh-ups.
Anyị nọ nso ebe ahụ, yabụ anyị ga-emezue ike. Omume ọzọ anyị ga-amalite bụ imeghe na mmechi emechi. Ọ bụrụ na o siri ike ime n’elu ala, mee ya ọzọ n’elu elu.
Ya mere, m ga-eji dayamọnd malite ma ọ bụ inwere ike ịmalite n’obosara, ihe ọ bụla masịrị gị. Nwere ike gbadata, ọ bụrụ na ị nwere ike ịgbawa n'ime oghere, nke ahụ zuru oke, ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịpụ apụ, nke ahụ dịkwa mma. Ka anyị gaa maka 10.ia Heria Music ay Ọ dị mma, ebe anyị gara, anyị nọzị nso.
Anyị emeela 80 pushups na anyị nwere naanị abụọ tent ekpe. Ngbanwe ọzọ anyị ga - abanye bụ ntinye typewriter. Dịka ị pụrụ ịhụ, achọrọ m iwulite ike gị site na mmemme nke na-etinye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ahụ gị n'otu akụkụ, nke na-eme ka nsogbu ahụ sie ike ma mee ka ị nwekwuo ike, yabụ ka anyị gafere.
Site na iji typewriter push-acha ọkụ, ịchọrọ ịnọ ala, yabụ ka anyị were ọnọdụ aka, anyị ga-ebido dị ka onye na-agba ụta, mana anyị ga-adị ala, anyị ga-agafe n'akụkụ nke ọzọ, na-edebe ogwe aka na-emegide oge ọ bụla. Jide isi gị. Ọ dị mma, anyị nwere pịnye typewriter.
Anyị nọ na nkwụsị ikpeazụ, mmega ikpeazụ ga-abụ pushups, pats na azụ maka 10 reps. Ọzọkwa, wulite ike gị maka ihe ị na-ejikarị aka abụọ eme, ugbu a, anyị na-eme otu, na-eme ka ahụ anyị niile dị elu mgbe anyị biliri. Ya mere ka anyi bulie elu, kpoo aka gi, mee ka ogwe aka anyi ijide aru anyi nile n'otu aka. Oh ♪♪ Oh ♪ Okay, there we have it, 100 pushups, dị mfe dị ka o kwere, na nanị otu a nkeji ole na ole.
Ma obuna na nani 10 ugboro iri nke 10, enwere m mgbapụta. Yabụ ọ bụrụ na ị mere nke ahụ, ekele gị, ị meela 100 ọfụma, ịchọrọ ịnọgide na-eme nke a kwa ụtụtụ. ozigbo ị tetara, ma ọ dịkarịa ala ugboro anọ n’izu.
N'oge ụfọdụ ị ga-ewulitekwu ahụ ike na ntachi obi, ị ga-enwe ike ịmeghachi ugboro ugboro. Start malitere ịme usoro ise nke 20 ugboro iri abụọ, mgbe ahụ usoro anọ nke 25 reps, mgbe ahụ usoro atọ nke 33, ụzọ abụọ nke 50, wee mechaa rụọ ọrụ na nke mbụ, na-abịaru 100 nso, na n’ikpeazụ naanị 100 na. Ma ọ bụrụ na ị jidesie ya ike ma nọgidesie ike, ọ bụghị naanị na ị ga-ahụ nnukwu uru na ike gị na nkwalite ahụ ike gị, mana ị ga-agakwa na mmega ahụ dị oke egwu ma wulie ike maka mmega ahụ dị elu dị ka ntinye zuru ezu.
Nke a bụ mmega ahụ ịchọrọ iji mara maka ịmeghe usoro nrụgide gị. Yabụ ọ bụrụ na nke ahụ bụ otu ebumnuche gị wee malite ịrụ ọrụ na ya ozugbo, hapụ okwu n'okpuru, mee ka m mara ihe isiokwu na-esote banyere, ma kesaa otu enyi na onye na-eme 100 pushups kwa ụbọchị ị ga-eme. Ma ọ bụrụ na i mebeghị, gbaa mbọ hụ na ndebanye aha gị.
Ana m eziga ụbọchị Tọzdee ọ bụla na elekere abụọ nke ehihie, Oge Ọwụwa Anyanwụ.
Ma ọ bụrụ na ị kwuo okwu n'ime nkeji iri atọ mbụ, ị nwere ohere iji merie uwe Heria n'efu. Echefukwala inweta mgbatị ahụ na ekwentị gị, yana ịnweta usoro mgbatị onwe m niile nke m mepụtara na ebumnuche a kapịrị ọnụ, dịka ịba abụba mgbe ị na-arụ akwara siri ike na-enweghị obere akụrụngwa, nye gị ijide n'aka na ị ghọrọ onye so na heriapro.com iji rụọ ọrụ mmemme m niile.
Ma hụ na ị na-ebudata ngwa Heria Pro site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Playlọ Ahịa Google ka ị were mgbatị ahụ ebe niile. Enwekwara mgbatị na mmemme mgbatị na-akwụghị ụgwọ na ngwa Heria Pro ka ị nwee ike ịnwale ha tupu ị gawa ị bụrụ onye otu. Maka ndị ọzọ n’ime ọdịnaya m n’izu ahụ, soro m na IG.
Akwụkwọ ọ bụla, ana m enye onyinye mgbe niile, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịbụ akụkụ ya, soro m na Instagram. Na nkwupụta ikpeazụ tupu m aga, ana m ahapụ nchịkọta Heria mbụ ị hụrụ na isiokwu ndị ahụ, dị ka ọsụsọ ahụ, nsụgharị ndị ọcha ha, uwe mwụda na-acha ọcha, jaketị, obere na ọtụtụ ndị ọzọ. Ya mere nọrọ na-ekiri na njikere maka dobe na-abịa chrisheria.com na njedebe nke November.
Ndi be anyi ekele m unu maka ilee, unu ga-ahu Tọsde na abali abali abuo n’elekere 2, pm, USA, Eastern Time.
Mad ịhụnanya, udo. (Egwuregwu elektrọnik) ♪ Ooh ♪♪ Oh ♪♪ Ooh ♪ Kụrie nke a dị ka bọtịnụ, ụmụ okorobịa ọkụ)
Kedu ihe omume 5 bụ isi?
'Ntughari mmadu mere kaise isimmegharị, nke gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile anyị na-eme kwa ụbọchị. ' Pụtara gịrụpụtachọrọ naanịise omume, otu site na nke ọ bụla n'ime edemede ndị a: ịkwanye (ịpịpụ n'ebe ị nọ), dọpụta (tugging n'ebe ị nọ), hip-hinge (na-ehulata site na etiti), squat (na-agbanwe ikpere na ikpere), na plank (...Sep 4, 2014
Enwere m ike ịme mgbatị ahụ 2 kwa ụbọchị?
Ọ dị mma ịrụ ọrụ ugboro abụọ aụbọchị? Ọ dị mma ịrụ ọrụ ugboro abụọ aụbọchịọ bụrụhaala na ị na-agbaso usoro mmemme ahaziri nke ọma. Ọ bụrụ na i meghịnaraoge zuru ike iji zuo ike n'etitimgbatị, ị nwere ike ijedebe na mmerụ ahụ. Enwekwara ohere iji gbaa oku site na aru oru ugboro abuo aụbọchị.Ọnwa Itolu 24, 2020
enweghị akwụkwọ nri
Gịnị nwere ike 20 pushups a ụbọchị ime?
Ọ dị mkpa ịnọgide na-abawanye ọnụ ọgụgụ iji maa ahụ gị ọgụ. Ọ bụrụ na ị nọgide na-eme20 ntinye akaruo ọnwa atọ mgbe ahụ akwara gịgamaara nke ọmaNtugharị 20 kwa ụbọchịeme ihe nagakwụsị ito. Kwesịrị, gịkwesịrịgbalịameeUsoro 3 nke 12 reps ọ bụlaụbọchị. Nke agaenyere gị aka inweta ahụ ike.Abụọ 12, 2019
50 pushups otu ụbọchị ga-eme ihe ọ bụla?
Ee, gịnwere ikebanye50 ntinye aka! Omumainupụ-eluna-abịaru nso na mmega ahụ zuru oke, na-agbagha ọtụtụ akwara dị na ogwe aka, obi, azụ, na isi iji wuo ike ọrụ niile. Mana ka anyi kwuo na elu ahụ m abụbeghị ọkara ka mma.Ọkt 7, 2015
2rụ ọrụ ụbọchị abụọ ọ dị njọ?
Ọ dị mma ịrụ ọrụugboro abụọ n'ụbọchịọ bụrụhaala na ị na-agbaso usoro mmemme ahaziri nke ọma. Ọ bụrụ n ’iwepụtaghị oge ezumike n’etitimgbatị, ị nwere ike ijedebe na mmerụ ahụ. Enwekwara ohere nke ịgba oku site na ịrụ ọrụugboro abụọ n'ụbọchị.Ọnwa Itolu 24, 2020
Ime mgbatị ahụ awa 2 ọ karịrị akarị ụbọchị?
Mmegandị riri ahụ na-eche na aabụọ-aka elekereọsọ na-eme ka ha nwee ahụ ike ugboro anọ. Ọ naghị arụ ọrụ ahụ.Imega ahụ gabiga ókènwere ike iduga mmerụ ahụ, ike ọgwụgwụ, ịda mba, na igbu onwe. O nwekwara ike ịkpata mmerụ ahụ́ na-adịgide adịgide.Jun 1, 2007
Kedu otu esi emega ahụ n'ụlọ na arịa ụlọ?
Nwere ike ịrụ ọrụ ọsụsọ wee wulite obi na ike site na iji ihe ndị dị n'ụlọ. Ndị a bụ mgbatị ole na ole ị nwere ike iji steepụ, nkụcha akwa, mgbidi ma ọ bụ ọbụna okpokoro kichin. Gwakọta ihe omume ndị a n'ime sekit, na-eme nke ọ bụla maka 15 gaa na 20 reps, 3 gaa na 5, maka mgbatị ahụ dum.
Gịnị bụ ụfọdụ omume dị mma ị ga-eme n'ụlọ?
30 Akpali iji Mee Ihe kachasị nke mgbatị ahụ n'ụlọ gị. 1 Àkwà mmiri. Mee ka isi gi na ogwe gi (okwu di nma maka aru aru gi) na akwa. Nke a bụ nnukwu mmega ahụ iji dị ka ihe na-ekpo ọkụ. 2 Oche oche squat. 3 Ikpere ikpere. 4 Anyịnya iri nri. 5 Plank ka Down Down Nkịta. Ihe ndị ọzọ
Kedu otu esi eme mgbatị ụlọ nke 20 nkeji?
Ntuziaka: 1 Bido dina n'azụ gị, ụkwụ gị na tebụl, na ogwe aka ị gbatịrị n'ihu gị. 2 N’ime mmegharị a gbatịa aka ekpe gị ma dobe aka nri gị n’elu isi gị, lezie anya ka obere ala gị ghara ito ala. 3 Weghachite ụkwụ gị na tabletop na ogwe aka gị n’ihu gị, wee jiri ogwe aka na-abụghị akụkụ na ụkwụ megharịa.